यो षड्यन्त्र हुन सक्छ
[2015-08-25 오후 7:20:00]
टीकापुर घट्ना निक्कै दुःखद् र त्रासदीपूर्ण छ । यो घट्ना कि त ठूलो षड्न्त्र हुनुपर्छ, कि त सयौँको संख्यामा हताहती भएका आन्दोलनकारीको संख्या लुकाईएको हुनुपर्छ ।
घट्नाबारे अहिलेसम्म एकपक्षीय सूचनाहरु आईरहेका छन् । धेरै मिडियाले सकारी अधिकारीहरुको सूचनामा केन्द्रीत भएर समाचार बनाईरहेको देखिन्छ । आएको तथ्यहरु यदि सबै सत्य हो भने पक्कै पनि यो आन्दोलनकारी आफ्नै बलबुतामा मात्र भएको भन्न सकिने स्थिति छैन ।
मात्र तीन आन्दोलनकारीको मृत्यु हुँदा यतिका प्रहरीको हत्या र घाईते हुनै सक्दैन । कि त यो योजनाबद्ध तथा सूनियोजित षड्न्त्र रचेर गराईएको घट्ना हो । कि त घट्नाले थप उग्र रुप लिने भएर सरकारी आन्दोलनरीतर्फ भएको क्षतिको विवरण सार्वजानिक गरेको छैन । ल मानौँ प्रहरीले फायर खोल्नुभन्दा अघि नै आन्दोलनकारीले उनीहरुलाई कब्जामा लिएर मारे रे ! तर के ८० जना हतियारबद्ध प्रहरी एकै ठाऊँ हुनु भनेको कम शक्ति हो?
त्यत्रो प्रहरीले आफ्नो प्रमुख कमाण्डर एसएसपीलाई मार्दासम्म तीन जना मात्र मर्नेगरी गोलि चलाए होलन त? लो गोलि चलाउन पाएनन रे, त्यत्रा तालिम प्राप्त प्रहरीले कम्तिमा ३/४ जनालाई त त्यसै पनि ढाल्छ । अर्को हतियार साथमा भएको प्रहरीले गोलि चलाउन थालेपछि आन्दोलनकारी त्यसै पनि भाग्छ ।
गृहमन्त्रीले २ सयको संख्यामा भाला, बञ्चरो र खुकुरी लिएर आएका आन्दोलनकारी भनेका छन् के त्यति सानो संख्याको प्रदर्शनकारीले त्यति ठूलो संख्यामा प्रहरीको हत्या गर्न सम्भव छ ? यो पत्याउन सकिने कुरा होइन । त्यत्रो घम्साघम्सी हुँदा आन्दोलनकारी पनि पक्कै घाईते भएका होलान ती कहाँ गए? अझ सर्वसाधारण आन्दोलनकारी त धेरे पर्नुपर्ने किनकी उनीहरुलाई यस्तो बेला सुरक्षित हुने तरिका नै थाहा हुँदैन ।
जिल्ला अस्पतालमा त घाईते प्रहरी मात्र छ भनिन्छ । के कुनै आन्दोलनकारी घाईते नभई त्यति ठूलो संख्याको प्रहरी हत्या सम्भव छ? छैन । त्यसैले कि यो ठूलो षड्यन्त्र हो कि त्यहाँ सयौँको संख्यामा आन्दोलनकारी हताहत भएको हुनै पर्छ । यथार्त सरकार र आन्दोलनकारी दुबैबाट तत्तकाल आउनुपर्छ । न कि भोलि फेरि यस्त्रै अर्को ठाऊँ आगो लागि सकेपछि ।
अर्कोतर्फ सकारी अधिकारीहरुले मृत्यु भएका प्रहरीहरुको संख्याबारे दिएको जानकारी पनि अतिरञ्जित हो कि जस्तो देखिन्छ । प्रजिअले अहिलेसम्म ६ जनाको मात्र हत्या भएको पुष्टि गरेका छन् । तर मिडियाले १७ जनाको हत्या भन्दै प्रचार गरेको छ । यसले तनाव झन बढाउने छ । यदि कसैले आन्दोलनकारीको भेषमा षड्न्त्रपूर्ण तरिकाले नेपालको तरल राजनीतिक अवस्थालाई अर्को दिशातर्फ मोड्न यो प्रयत्न गरेको हो भने आम नेपालीहरुले सचेततापूर्वक यसको सामना गर्नुपर्छ । आन्दोलकारीले पनि आफ्नो आन्दोलनलाई आफ्नै कमाण्डमा राख्न सक्नुपर्छ ।
षड्न्त्र वा यर्थात जे भए पनि आफ्नो परिचय खोज्दै सडकमा आएका थारुहरुको मागलाई बुद्धिहिन नेताहरुले कुनै न कुनै ढंगले चाँडै संबोधन गर्नु जरुरी छ । थारुहरुको मात्र होइन उत्पीडित समुदायको पहिचान र अधिकार स्थापित गर्नेतिर पनि टाउकेहरुको ध्यान जान उत्तिकै जरुरी छ होइन भने यस्तो घट्ना कैलालीमा मात्र होइन देशको विभिन्न स्थानमा कुनै न कुनै दिन हुने अवश्यम्भावी छ ।
गोरखा पत्र दैनिकमा कार्यरत पत्रकार राजेश चाम्लिङको फेसबुकबाट ।